လျှို့ဝှက်ကင်မရာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာတရားဝင်မှု OMG Solutions
WhatsApp: စင်ကာပူ + ၆၅၈၃၃၄၄၆၆၊ ဂျကာတာ +658333 ၈၁၂၉၃-၄၁၅၂၅၅ (၅၁ Ubi Ave 4466 # 62-81293A Level 415255, S51 - ဖွင့်လှစ်: မွန် - စနေ၊ ၁၀း၀၀ မှညနေထိ)
လျှို့ဝှက်ကင်မရာအသုံးပြုမှု၏တရား ၀ င်မှု
ယနေ့လျှို့ဝှက်ကင်မရာများ၏တရား ၀ င်နှင့်တရားမဝင်တပ်ဆင်မှုများအကြားမညီမျှမှုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လွှားရှိလူများကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်အရာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဝှက်ထားသောကင်မရာအသုံးပြုခြင်း၏တရား ၀ င်မှုအခြေအနေများကိုမေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖုံးကွယ်ထားသောကင်မရာတရားမဝင်ဖြစ်လာသည့်အချိန်သည်မီးခိုးရောင်areaရိယာဖြစ်နိုင်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်နယ်တစ်ခုစီတွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာများ၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းကိုယေဘူယျအားဖြင့်တင်းကျပ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဆိုရသော်သင်ရိုက်ကူးသူ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲသင်၏အများမြင်ကွင်းသို့မဟုတ်အိမ်တွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာဖြင့်စောင့်ကြည့်ရသောဗွီဒီယိုကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်တရားမဝင်ပါ။ သို့သော်အချို့သောကင်းလွတ်ခွင့်များကိုလိုက်နာရမည်သို့မဟုတ်တရားမဝင်ဖြစ်လာသည်။ ဤအရာကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိပါကသင်၏ပြည်နယ်ဥပဒေသည်သင်၏လုံခြုံရေးကင်မရာတပ်ဆင်ခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏လုံခြုံရေးစနစ်ကိုပြ,္ဌာန်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကင်မရာကိုအလုပ်နေရာ၌ထားခြင်းဖြစ်စေ၊ သင်၏အပြင်ဘက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အပြင်ဘက်တွင်ကင်မရာတပ်ဆင်ခြင်းကိုစဉ်းစားသည်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမည်သည့်ဥပဒေကိုမဆိုချိုးဖောက်ပါကသင်အနေဖြင့်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသည်။ လူတွေကင်မရာကိုစောင့်ကြည့်နေရင်လူတွေကိုမွမ်းမံဖို့လိုသလား။ ကင်မရာတပ်ဆင်သည့်အခါတရားမ ၀ င်သောနေရာအနည်းငယ်ရှိပါသလား။ လူတွေကိုတရားမ ၀ င်သူလျှိုတွေဖမ်းမိတာဟာရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်တာလို့ယူဆပြီးဝှက်ထားသောကင်မရာများတင်ခြင်းဟာတရား ၀ င်ဖြစ်ကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်အမှန်လေ့လာချင်ပါတယ်။
သူလျှိုများ၏တရားဝင်မှုသည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြissueနာနှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူလျှိုများကိုတရားဝင်အဖြစ်ရှုမြင်သော်လည်း၊ သူလျှိုသည်တရားမ ၀ င်သောဥပမာများရှိသည်။ လျှို့ဝှက်ကင်မရာကိုလျှို့ဝှက်နေရာ၌ထားခြင်းသို့မဟုတ်မုန်းတီးသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထားခြင်းဖြင့်ဝှက်ထားသောကင်မရာများကိုတရားမဝင်ဖြစ်စေသည်။ ပြည်နယ်အမျိုးမျိုးတွင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနည်းပညာအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားသောဥပဒေများရှိသောကြောင့်သင့်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဤဥပဒေများနှင့်မှတ်မိရမည်ဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်းများကဲ့သို့သောသီးသန့်နေရာများတွင်သူလျှိုကင်မရာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရားမ ၀ င်သောကြောင့်ထိုဒေသရှိသုံးစွဲသူများသည်သီးသန့်လုံခြုံရေးအပြည့်အဝရရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။
တခါတရံတွင်သင်သည်ဖုံးကွယ်ထားသောကင်မရာကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ကင်မရာကိုမတပ်ဆင်မီသင်၌ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဥပဒေဆိုင်ရာမေးခွန်းအချို့ကိုသင်အံ့သြလိမ့်မည်။ ဖုံးကွယ်ထားသောကင်မရာများသည်တရားမ ၀ င်ဘူးလား။ ငါဖုံးကွယ်ထားသောကင်မရာများရှိနေခြင်းအကြောင်းကိုဘာသာရပ်ပြောပြသင့်သလား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ 50 ပြည်နယ်အားလုံးတွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်ဗွီဒီယိုများကိုလျှို့ဝှက်ကင်မရာများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်အများပြည်သူပိုင်နေရာများတွင်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာများတွင်ပြင်ပပန်းခြံများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ ရုံးများ၊ စီးပွားရေးစင်တာများနှင့်မြို့လမ်းများပါဝင်သည်။ သီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်ယုတ္တိအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေများသည်အများပြည်သူပိုင်နေရာများတွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်မိုင်၊ တောင်ဒါကိုတာ၊ ဟာဝိုင်ယီ၊ မင်နီဆိုတာ၊ New Hampshire၊ Utah၊ Kansas, Michigan, Delaware, Arkansas, Georgia, Alabama၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၏စာဖြင့်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်သည်။ ဤပြည်နယ်များသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနေရာများနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုစိတ်ကူးမထားသည့်နေရာများတွင်ဝှက်ထားသောကင်မရာများကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါ။
မင်းအလုပ်မှာဒါမှမဟုတ်ဈေးဝယ်ထွက်နေချိန်မှာသင့်ကလေးထိန်းတွေကိုကြည့်ရှုလေ့ရှိတဲ့ဒီကင်မရာများထိန်းထိန်းနိုင်မဲ့ကင်မရာတွေအားလုံးကိုငါတို့အားလုံးကြားနာခဲ့ရတယ်။ များသောအားဖြင့်ပြောရလျှင်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသူ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲသင်၏အိမ်၌ဖုံးကွယ်ထားသောကင်မရာဖြင့်စောင့်ကြည့်နေသည့်ဗီဒီယိုကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်တရားဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်အိမ်တွင်းအပြင်ဘက်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောမိဘများနှင့်အုပ်ထိန်းသူများအကြားတွင်အထိန်းသုံးပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းသည်တဖြည်းဖြည်း ပို၍ များလာသည်။ သင့်ကလေးများနှင့်မိသားစုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်သင့်အိမ်ထဲ၌ကလေးထိန်းတပ်ဆင်ထားသောကင်မရာကိုမထည့်မီ၊ သင့်ပြည်နယ်ရှိဥပဒေများကိုဖတ်သင့်သည်။
သတိရသင့်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ခြားနားချက်တစ်ခုကတော့အသံဖမ်းခြင်းနဲ့ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းတို့ရဲ့ကွာခြားချက်ဖြစ်တယ်။ ပြည်နယ်အများစုတွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာဗွီဒီယိုများကိုရိုက်ကူးရန်အတွက်ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းသည်သင်၏ဘာသာရပ်များသည်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုမျှော်လင့်ထားသည့်ဒေသများ၌မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်တွင်သင်ဘာသာရပ်များသင့်အိမ်၌နေထိုင်ပါကဤဒေသများတွင်ရေချိုးခန်းနှင့်အိပ်ခန်းတို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ကင်မရာများသည်နာရီများ၊ ဝက်ဝံရုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ကွယ်ဝှက်ထားသည်။ ဤကိရိယာများသည်ကလေးများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်ကလေးထိန်းများလာရောက်ချိန်တွင်မိဘများသည်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရစေသည်။ သင်စဉ်းစားကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ နာရီကင်မရာဖြင့်သင်တွေ့ကြုံရမည့်တရားဝင်မှုသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤထိန်း - ဖုံးများဖုံးကွယ်ခြင်းသည်တရားဝင်သည်။ အလားတူအရာသည်သင်၏အိမ်အပြင်ဘက်နှင့်သင့်အိမ်ခြံမြေများရှိစောင့်ကြည့်သည့်စနစ်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ သင်၏အိမ်ခြံမြေတွင်ကင်မရာအသုံးပြုရန်သင်ရွေးချယ်ပုံသည်တရားရုံးတွင်တင်ပြသည့်ကိစ္စများတွင်အဓိကဖြစ်သည်။ သင်၏အခြေခံမှာ - guests ည့်သည်များအနေဖြင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုယုတ္တိရှိရှိမျှော်လင့်ထားသရွေ့သင့်အိမ်တွင်သင့်တော်သောမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုလျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုအခမဲ့အသုံးပြုရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်၌ဤနေရာသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင်နေထိုင်ပါကရေချိုးခန်းများသို့မဟုတ်အိပ်ခန်းများကိုသိုထားနိုင်သည်။
ကလေးများအားသူလျှိုတစ် ဦး ၏အိမ်သို့သွားလျှင်၎င်းသည်သင့်ကလေး၏လုံခြုံမှုအတွက်သော်လည်းအခြားအိမ်၌တရားမဝင်ပါ။
ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီသည်သီးသန့်အကြောင်းအရာများကိုသင့်လျော်သောမျှော်လင့်နိုင်သောနေရာများတွင်ဖုံးကွယ်ထားသောကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းကိုအထူးတားမြစ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသူသို့မဟုတ်သူမ၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲမည်သည့်ပုဂ္ဂလိကနေရာတွင်မဆိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုယူဆသင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဗီဒီယို (သို့) အသံဖမ်းယူမှုဟာတရားမဝင်အကြောင်းပြချက် (သို့) တခြားမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်တာဟာတရားမ ၀ င်ဘူးဆိုတာကိုသတိပြုပါ။ သင်သည်သင်၏ပြည်နယ်အတွင်းရှိလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သောအခြားစည်းမျဉ်းများအားလုံးကိုလိုက်နာနေလျှင်ပင်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်လျှင်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုစွန့်လွှတ်ကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ လျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကိုသုံးနိုင်သည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်များအကြောင်းပြောနေသည့်အခါသင်က Airbnb guests ည့်သည်များသို့မဟုတ်သင့်အိမ်သို့သင်ကြိုဆိုသောအခြားမည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုမဆို ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါက၎င်းတို့ကိုသူလျှိုလုပ်ခြင်းသည်တရားမဝင်ပါ။ “ လျှို့ဝှက်ခြင်း၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောမျှော်လင့်ချက်” အပိုဒ်တွင်ဤစည်းမျဉ်းကလျှို့ဝှက်ကင်မရာများသည်အိပ်ခန်းများနှင့်ရေချိုးခန်းများပါ ၀ င်သည့်အတွက်သီးသန့်အခြေအနေတွင်တရားဝင်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သင်က Airbnb အိမ်ရှင်ဖြစ်လျှင်သင်၏တည်းခိုခန်းတွင်ကင်မရာတစ်လုံးတင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဒီနေရာတွေမှာကင်မရာကိုရိုက်ချင်နေသေးတယ်လို့သင်ထင်ရင်ဒီလေ့လာမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ the ည့်သည်တွေကိုကြွေးတင်နေတယ်။ သို့သျောလညျး, သငျသညျဤကဲ့သို့သောထွက် Airbnb နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်လုံးဝသီးခြားပြseparateနာဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏အိမ်တွင်ကင်မရာများတပ်ဆင်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုအများသုံးနေရာတွင်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍? များသောအားဖြင့်လူသုံးများသောနေရာများတွင်ထိုကဲ့သို့သောလက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များသို့မဟုတ်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိစောင့်ကြည့်ကင်မရာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင်ရောက်ရှိနေသောသူများသည်၎င်းတို့၏ privacy ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ အပြင်ဘက်ရှိစျေးဝယ်စင်တာများ၊ မြို့လမ်းများ၊ ပန်းခြံများသို့မဟုတ်အများပြည်သူရင်ပြင်များတွင်လျှို့ဝှက်ဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ သီးသန့်တည်ရှိမှုလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာမျှော်လင့်ခြင်းသည်အများပြည်သူနေရာများတွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာများ၏ setting ကိုလည်းသက်ဆိုင်သည်။ လျှို့ဝှက်ဗွီဒီယိုတစ်ခုအားသော့ခတ်အခန်းများ၊ ပြောင်းလဲနေသောအခန်းများ၊ အိပ်ခန်းများ၊ ဟိုတယ်ခန်းများနှင့်အခြားသီးသန့်နေရာများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းသည်တရားမဝင်ပါ။
အလုပ်ခွင်ရှိ Hidden Camera:
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဖယ်ဒရယ်အစိုးရနှင့်ပြည်နယ်များမှအစိုးရများသည်လုပ်ငန်းခွင်၌လျှို့ဝှက်ကင်မရာရိုက်ကူးခြင်းအတွက်ဥပဒေပြset္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပါ။ သင်သည်သင်၏အလုပ်ခွင်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသောကင်မရာကိုတပ်ဆင်လိုပါက၎င်းကိုတရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်သူတို့၏ရုံးများနှင့်အခြားစီးပွားရေးနေရာများတွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာများတပ်ဆင်ပါကများသောအားဖြင့်၎င်းတို့၏တရားဝင်အခွင့်အရေးများတွင်ရှိနေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည် ၀ န်ထမ်းများအားလျှို့ဝှက်ကင်မရာများရှိနေခြင်းအားတရားဝင် ၀ န်ခံရန်မလိုပါ။ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားလျှို့ဝှက်ကင်မရာများရှိနေကြောင်းအကြောင်းကြားရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ အမျိုးသားအလုပ်သမားရေးရာဘုတ်အဖွဲ့မှချမှတ်ထားသောလမ်းညွှန်ချက်များမှရရှိသောပိုမိုကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများ - အထူးသဖြင့်အလုပ်သမားအလုပ်သမားများနှင့်အတူအလုပ်သမားများသည် - လျှို့ဝှက်ကင်မရာများအသုံးပြုမှုကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောအလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့်မကြာခဏဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ထပ်မံ၍ ၎င်းတို့ကိုလိုအပ်သည့်သတ်မှတ်ထားသောဖယ်ဒရယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဥပဒေများအနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။ စီးပွားရေးသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်သင်၏စီးပွားရေးနေရာ၌လျှို့ဝှက်ကင်မရာတပ်ဆင်ရန်တရားဝင်အခွင့်အရေးရှိပါက။ ၀ န်ထမ်းများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ရုံးများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်များရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုယုတ္တိရှိသည်။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုအလုပ်ကိုသင်ချိုးဖောက်ပါက၎င်းတို့သည်သင့်အားတရား ၀ င်အရေးယူရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ပိုင်ရှင်များစွာသည်မိမိတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားသူတို့၏နေရာများရှိကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းကိုအကြောင်းကြားကြသဖြင့်သူတို့၏အကောင်းဆုံးသောအပြုအမူကိုပြသရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိကြသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မသင်မနေရဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းခွင်၌လျှို့ဝှက်ကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်ပြောပြသည်။ ငါကပါကစ္စတန်၊ Chakwal ရှိပညာရေးပညာပေးကျောင်းတွင်မြို့တော်ရှိထိပ်တန်းကျောင်းများတွင်သင်ကြားခဲ့သည်။ ကျောင်းပိုင်ရှင်သည်ဆရာများသာမကကျောင်းသားများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက်စာသင်ခန်းများနှင့် ၀ န်ထမ်းခန်းများ၌ Hidden ကင်မရာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုစာသင်ခန်းများနှင့်ကျောင်း၏အခြားခန်းများ၌တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်ကျောင်းပိုင်ရှင်သည်ကျောင်းသားများကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုစစ်ဆေးချင်သောကြောင့်ဆရာအချို့သည်သူတို့၏ကျောင်းသားများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့သည်ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရန်တာဝန်ရှိသည့်အချိန်တွင်ဆရာများကိုလည်းနိုးကြားစေလိုကြသည်။ ဒါကြောင့်ပါကစ်စတန်မှာလည်းတရား ၀ င်ပါတယ်။
Audio Surveillance သည်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်၌မရှိသောအခါသင်၏အလုပ်ခွင်၌သင်၏ ၀ န်ထမ်းများကိုလေ့လာရန်နောက်ထပ်စွမ်းရည်ရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hidden Camera Surveillance ၏ Law များသည်အသံစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ သင်တစ် ဦး ချင်းစကားပြောဆိုမှုသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်လိုပါကယူအက်စ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဥပဒေကရှင်းပြသည်မှာအနည်းဆုံးပါတီတစ်ခုမှမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုရမည်ဟုရှင်းပြသည်။ ၎င်းကိုတစ်ပါတီသဘောတူညီမှုအဖြစ်လူသိများသည်။ ယနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်နယ်အများစုသည်ထိုသို့ပြုကြသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ကော်နက်တီကပ်၊ ဖလော်ရီဒါ၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၊ မေရီလန်း၊ မက်ဆာချူးဆက်၊ မွန်တာနာ၊ ဟာဝိုင်ယီသည်အသံသွင်းခြင်းအတွက်ပါတီမှခွင့်ပြုချက်တစ်ခုကိုခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်အသံဖမ်းစက်ကိုသီးသန့်နေရာတွင်တည်ရှိပါကနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်တရားမဝင်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုခံနေရသည်ဟုယူဆပါကလျှို့ဝှက်ကင်မရာများ၊ အသံချို့ယွင်းမှုများနှင့်ခြေရာခံစက်များရရန်ကင်မရာရှာဖွေစက်ကိုရနိုင်သည်။ ယင်းတို့အနက်မှတစ်ခုကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်တာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးဌာနကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့ထက်ကားဤလျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုမည်သို့ထားရမည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားနိုင်သည်။ သင်က Airbnb ၏ guest ည့်သည်ဖြစ်ပါကအိမ်ရှင်အား Airbnb သို့အကြောင်းကြားနိုင်သည်။ အလားတူအမှုအရာဟိုတယ်များအတွက်သွားနေကြသည်။ လျှို့ဝှက်ကင်မရာသည်တရား ၀ င်မှုနှင့်တရားမဝင်သောအခါသတိထားသင့်သည်။
ပန်းခြံများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ကျောင်းများ၊ ကောလိပ်များ၊ စီးပွားရေးစင်တာများ၊ ရုံးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များတွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အိပ်ခန်းများ၊ လျှို့ဝှက်ကင်မရာကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာသီးသန့်တည်ရှိမှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသည့်နေရာတွင်ထားခြင်းကလျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုတရားမ ၀ င်ဖြစ်စေသည်။
သင်ဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လား၊ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်လား၊ တရားဝင်လမ်းညွှန်ချက်များသည်သင့်အတွက်မရေမရာဖြစ်နေပြီးလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းထားသောကင်မရာများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာများရှိပါသလား။ သင်၏ဖုံးအုပ်ထားသောကင်မရာများအားတရား ၀ င်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုနားလည်ရန်သင့်အားကူညီမည့်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သို့မဟုတ်ရှေ့နေပညာရှင်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ လျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်မှုများကြောင့်သင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နေပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာကိုရှာဖွေရန်အရည်အသွေးရှိသောထုတ်ကုန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ လျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုရှာဖွေရန်အရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာများရှိသည်။
5799 စုစုပေါင်း Views စာ9Views စာယနေ့တွင်
OMG Solutions အကြောင်း
OMG Solutions သည်ခြေရာခံခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်နှိုးစက်နည်းပညာအမျိုးမျိုးကိုအထူးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်ပြproblemsနာများအတွက်ခေတ်မီဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သောကျဆုံးခြင်းကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှိုးစက်များ၊ OMG Solutions ကို ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ တွင်စင်ကာပူ 500 လုပ်ငန်းကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသည်အင်ဒိုနီးရှားကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများအထိမြို့တော်ကို ကျော်လွန်၍ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ငါတို့သွားရောက်ကြည့်ရှု ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း စာမျက်နှာ။